Ngubani umphathiswa omtsha wezokhenketho waseIran, Hon. Ndidibeneyo no-Ezatullah Zarghami
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseIran eziQhekezayo » Ngubani umphathiswa omtsha wezokhenketho waseIran, Hon. Ndidibeneyo no-Ezatullah Zarghami
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • Amalungelo abantu • Iindaba zaseIran eziQhekezayo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
U-Ezzatollah Zarghami, uMphathiswa wezoKhenketho eIran Ngokunyanisekileyo: Khamenei.ir -
Umongameli omtsha wase-Iran uqeshe u-Hon. U-Seyed Ezatullah Zarghami njengo-Mphathiswa omtsha weNkcubeko yeLifa leMveli noKhenketho. WayenguSekela Mphathiswa Wezenkcubeko kunye noMphathiswa wamaSilamsi kunye noMphathiswa Wezokhuseleko ngaphambi kokuba abambe isikhundla njengentloko yeRiphabhlikhi yase-Iran ye-Iran yosasazo ukusukela ngo-2004 ukuya ku-2014.
U-Ebrahim Raisi, umongameli omtsha we-Islamic Republic of Iran, wonyula ikhabinethi yakhe nge-8 ka-Agasti. Ipalamente kuya kufuneka ivume onke amalungu ekhabinethi atyunjiweyo.
Icandelo loMphathiswa Wezolimo zeNkcubeko kunye nezoKhenketho laseIran baya kuba noMongameli. U-Seyed Ezatullah Zarghami wonyulwe njengo-Mphathiswa omtsha.
Kwi-2018 i-Iran yayiphantse yaba zizigidi ezisibhozo zabakhenkethi bamanye amazwe.
I-Iran yenye yezona mpucuko zidala emhlabeni kwaye ibiphakathi kwezona ndawo zicinga kwaye zintsokothileyo kwasekuqaleni. Kukho imiba yempucuko yaseIran ethi, ngandlela thile okanye enye, ichukumise phantse wonke umntu emhlabeni. Kodwa ibali lokuba yenzeke njani loo nto, kunye nokubaluleka okupheleleyo kwezi mpembelelo, zihlala zingaziwa kwaye zilibalekile.
Umbutho wezoKhenketho ne-Iran ichaza ukhenketho eIran ngelithi hamba uye eIran. I-Persia, uMhlaba wamaxesha onyaka amane kunye nembali etyebileyo kunye nembala, izikhumbuzo ezininzi, ukubuk 'iindwendwe eIran kunye nokutya okumnandi.
Tyethu in Iran yahlukile, ibonelela ngemisebenzi eyahlukeneyo ukusuka ekunyukeni intaba nokuskiya kwiiAlborz kunye neZagros, ukuya kwiiholide zolwandle yiPersian Gulf.
I-Iran ibethwe kakhulu yi-COVID-19 kwaye ke ishishini layo lokuhamba nokhenketho.
Umzi-mveliso wokhenketho eIran uphulukene nelahleko yezigidi ezingama-320 zeerandi (i-7.6 yezigidi zeedola kwizinga lotshintshiselwano olusemthethweni lweerali ezingama-42,000 ngedola) okoko kwaqhambuka ubhubhane we-coronavirus, ingxelo ye-ISNA ngoLwesibini.
Esi sifo sonakalise nangaphezulu kwemisebenzi engama-44,000 kwicandelo lokuhamba elalisakhasayo kweli lizwe, yongeze ingxelo.
Ngenxa yokuqhambuka kwe-coronavirus e-Iran kunye nentswela-ngqesho elandelayo kunye nelahleko yezemali, amaziko okuhlala ahlupheke kakhulu. Ezi nkcukacha-manani zigubungela ixesha eliphakathi kukaFebruwari 2020 nentwasahlobo ka-2021.
Amaziko okuhlala athathe i-280 yezigidi zeerandi (i-6.6 yezigidigidi) kwi-virus, ngelixa abasebenzi be-21,000 kula maziko belahlekelwe yimisebenzi ngeli xesha likhankanyiweyo.
Iiarhente zoKhenketho zibe lelona qela lesibini lichaphazeleka kakhulu kushishino lwezokhenketho, nangaphezulu kwe-10 yezigidi zeerandi ($ 238 yezigidi) yomonakalo nangaphezulu kwama-6,000 abantu abangasebenziyo ukusukela oko kwaqhambukayo.
Ngokumalunga nengqesho kunye nelahleko yemali, izakhiwo zokhenketho, i-eco-lodges, kunye nezikhokelo zabakhenkethi zikwangamanye amaqela achaphazelekayo kushishino lokhenketho.
Nguba ni u yena Hon. U-Sayyid Ezzatollah Zargham, umphathiswa omtsha wezokhenketho kwiRiphabhlikhi yase-Iran?
Ihotele yoShishino olugqibeleleyo kunye ne-Spa eTaipei, eTaiwan
Kudutyulwe kwisikhululo seenqwelomoya saseAtlanta